🥇 ▷ Sida loo beddelo midabka lahjadda ah ee nidaamka mobiilkaaga oo leh Android 10 ✅
Sida loo beddelo midabka lahjadda ah ee nidaamka mobiilkaaga oo leh Android 10
Haddii aad tahay taageere Android waa inaad ogaataa in shalay Google loo adeegsaday soo bandhigida Android 10. Nidaamka cusub ee hawlgalka ayaa durba run ah oo wuxuu leeyahay nooc gabi ahaanba xasilloon oo lagu rakibi karo Google Pixel. Waxyaabaha Betas loogu talagalay soosaarayaasha iyo imtixaannada Google ee leh shaqooyinka kala duwan ayaa horay looga soo tagay. Isbedelada waa rasmi kuwa la hirgaliyayna ma baabi’i doonaan, ugu yaraan, muddada Android 10. Maanta waxaan ogaanay hawl u soo baxday Android 10 sidii wax cusub oo aan la xiriirin shaqsi ahaaneed. Waxay ku saabsan tahay suurtagalnimada Beddel midabka nidaamka dhawaaqa.
Midabka lahjadda waa midabka uu Google ku isticmaalo astaamaha, baararka nidaamka ama qaybo kale. Midabkani, illaa iyo hadda, lama beddeli karin iyada oo aan la helin codsiyada dhinac saddexaad, xidid ama ROM caado u leh. Hadda Android 10 wuxuu naga tagayaa suurtogalnimada inaan kala dooranno 8 midab oo kala duwan si aad u siiso taabasho aad u kala duwan qalabkeena.
Sida loo beddelo midabka afafka taleefankaaga Android 10
Waqtigaan kaliya Google Pixel iyo Redmi K20 Pro ayaa cusbooneysiin kara Android 10 si hufan, sidaa darteed iyagu waa kuwa kaliya ee tijaabin kara shaqada. Annagu garan mayno haddii MIUI ay shaqadan uga tagayso ama ay fulinayso iyada si ay u shaqeysato lakabkeeda. Kuwa isku dayi kara waa dhamaan adeegsadayaasha a Google Pixel iyo Android 10.
Runtii waa wax fudud, laakiin taasi waxay u baahan tahay dejiyada horumarinta. Kaliya waa inaad gasho dejimahaan oo aad doorataa waxa loogu yeero ‘Lahjad midab leh’. Waxaad awood u yeelan kartaa inaad kala doorato dhowr ikhtiyaar oo leh midabbo sida cagaar, buluug, guduud ama qaar ka mid ah oo leh magacyo habboon oo Google hirgalisay. Wadarta xulashooyinka waa 8.
Markaad bedesho midabka ereyga ee nidaamka waad isla markiiba ku mahadsan doontaa, sababta oo ah faahfaahinta horey midabka buluuga ah waxay hadda noqoneysaa midabka aad dooratay. Waa wax iska caadi ah oo la samayn karo sanado badan oo xidid la leh, laakiin hadda waxay si rasmi ah u soo gaadhay Android 10 si ay u adeegsadaan dhammaan adeegsadayaasha si fudud oo ay u habayn karaan interface ka.
Xigasho | AA